ဘယ်သူ့ကို ယုံရမှာလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဘယ်သူ့ကို ယုံရမှာလဲ ?
ဘယ်သူ့ကို ယုံရမှာလဲ ?
Posted by မောင်ဆန်း on Jul 5, 2011 in Opinions & Discussion | 12 comments
Weekly Eleven website ရဲ့ ပင်မစာမျက်နှာ အောက်ဆုံးမှာ ကာတွန်းလေးတွေရှိပါတယ် သူတို့ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာပါ သတင်းထူး သတင်းဦးလေးတွေ ဖော်ပြတတ်၊ ကာတွန်းလေးတွေက အတွေးလေးတွေကောင်းလို့ အချိန်ရတာနဲ့ အမြဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ် အောက်က ကာတွန်းလေးက “လူကြီးမင်း” (နာမည်ကတော့ အပျံစားပါ) ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဆရာ ဆွဲထားတာပါ အတွေးလေးကောင်းလို့သဘောကျမိပါတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေလေး တစ်ခုကို သရော်ထားတာပါ ဖော်ပြထားတဲ့ အစီအစဉ်အရ သူတို့ဂျာနယ်တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လလောက်အတွင်း ဖော်ပြထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်..
ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ပုံမှန်ယူဖတ်တဲ့ ဂျာနယ်ရှိသလို သွားရင်းလာရင်း ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်ခါတစ်ရံ ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေလဲရှိပါတယ် ၂-၆-၁၁ တုန်းကတော့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေရဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေချမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေးစိတ်ဝင်စားလို့ Popular News Journal (No 25, Vol3)ကို ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အောက်က ကာတွန်းလေးက အဲဒီဂျာနယ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကာတွန်းလေး တစ်ခုပါ ဆွဲတဲ့သူကလည်း “လူကြီးမင်း”ပါပဲ ဒီဆရာ တော်တော်ဆွဲနိုင်တာပဲပေါ့ ကြည့်လိုက်တော့မှ အရမ်းတော်တဲ့ ဆရာဖြစ်နေတော့တာပဲ…
ကြိ်ုက်တာမေးဆိုလို့ မေးတာလေဗျာ နဲ့ မေးနေတာလေ ဆိုတာလေးပဲကွဲတယ်
မီဒီယာ တစ်ခုခုကို ၀တ္ထု၊ကဗျာ၊ကာတွန်း ပို့ရင် ဒါမှ မဟုတ် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုမှာ ၀င်ပြိုင်ရင် မိမိရေးသားထားတဲ့ စာမူဟာ ဘယ်မီဒီယာမှာမှ ဖော်ပြခံထားရခြင်းမရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက် နဲ့အတူ ရေးသား ပေးပို့ရပါတယ်၊တစ်ခုမှာပေးပို့ထားရင် နောက်တစ်နေရာကိုပေးပို့ခွင့်မရှိပါဘူး ….
အခုဆရာလူကြီးမင်းက ပေးပို့ထားပါတယ် ဆရာအယ်ဒီတာမင်းကလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ် ဘာဖြစ်လို့များလည်း
WElevne နဲ့ PNews က ညီအမဂျာနယ်တိုက်တွေမို့ ထည့်လို့ရတာလား
ပရိသတ်များများ ဖတ်မိ တွေးမိအောင်လို့ ဂျာနယ်နှစ်စောင်မှာ ထည့်တာလား (အဲဒါဆို ဂျာနယ်တိုင်းမှာ ထည့်လိုက်ရင် ပိုဖတ် ပိုတွေးကြမှာ)
တစ်စောင်နဲ့ တစ်စောင်ထုတ်တဲ့ရက် ကွာနေတာပဲ ဘယ်သူမှ မသိလောက်ပါဘူးဆိုပြီး ထည့်တာလား
ပထမ တစ်စောင်ပို့တာ တော်တော်နဲ့မပါနိုင်လို့ နောက်တစ်စောင်ပို့တာလား (အဲဒါဆို ပထမတစ်စောင်ကို သေချာအောင်မေးသင့်တယ်)
တကယ်တော့ ဂျာနယ်နှစ်စောင် မှာ ကာတွန်းတစ်ခု နှစ်ခါပါတာ ပြသနာကြီးကြီးမားမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ လူထုရင်ထဲ ဘာဖြစ်နေလဲ ဘာပြောချင်လဲ ဆိုတာတွေကို သက်ဆိုင်သူတွေသိအောင် အမြန်ဆုံးနဲ့ အမှန်ဆုံးဖော်ပြပေးနိုင်တာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဆိုတဲ့ မီဒီယာတွေပါ အလွတ်လပ်ဆုံးမဟုတ်တောင် အရင်ထက်ပိုလွတ်လပ်တဲ့အနေအထားနဲ့ ဖော်ပြခွင့်ရနေတဲ့ အနေအထားမှာ ပြည်သူလူထု ရဲ့ ယုံကြည်လေးစားမှုကို အလွဲသုံးစားမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ဒီအချိန်မှာ စာနယ်ဇင်း ဆရာတွေကိုမှ မယုံရရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကို ယုံရမှာလဲ
အခုပြောင်းလို့ ရပြီဗျို့ ထီသွားထိုးရမယ်
မနက်က ဘာမှ မပါဘူး အခုပို့စ်မှာရော ကွန်မန့်မှာရော edit ပါလာတယ်
အပေါ်က ပို့စ် မှာ ကာတွန်းတစ်ပုံ(အပေါ်ပုံ )ထည့်ထားတာ မပါလာလို့ ပြန်ထည့်ဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ်
မှန်းလိုက်မယ် အဲဒီဂျာနယ်နှစ်စောင်က အယ်ဒီတာတွေက သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေဖြစ်ရမယ်….
ကာတွန်းတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးတို့ ဝတ္ထုတို့တောင် အဲသလို
အယ်အယ် အိပ်ငိုက်သွားလို့.. မွားသွားတာ..
ပြောသာ ပြောတာ.. လူတော်တော် များများ ဂျာနယ်တွေ စိတ်ဝင် တစား ဖတ်ကြတယ်..
တခု ဖတ်ရင် တခု မဖတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့်များလား..
ပရိတ်သတ် ဆိုတာ လိမ်မရဘူး ဆိုတာ အဲဒါပဲနော်..
သင့်အား မျက်လုံးပေါင်း များစွာ က စောင့်ကြည့်နေသည်။
အခုထိ ပုံထပ်ထည့်ဘို့ edit လုပ်လို့မရသေးပါ ၊ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိသူများ ကူကြပါဦးဗျာ
အမြဲတမ်း..ရန်သူ..အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေရယ်လို့ မရှိဘူးတဲ့…. (US က)
အမြဲတမ်း ယုံရမည့်သူ.. အမြဲတမ်း မယုံရမည့်သူ ဟူ၍ မရှိ
အဆင်ပြေသလို ယုံလိုက်ပါ (UM)
ဒီနိုင်ငံက လူတွေက ဘယ်တော့မှ အမျိုးမျိုး မလုပ်ဘူး…
သူတို့အတွက် မူမှာကိုက နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်.. နှစ်မျိုးပဲ ပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်..
( ခု တစ်မျိုး.. တော်ကြာ တစ်မျိုး) နှစ်မျိုးထဲနော်…
ကာတွန်းပုံကတော့ နှစ်ခါဆွဲထားတာပဲ။ မတူတာရှာပါဆိုပြီး ရှာခိုင်းဖို့ ဆွဲထားတာ မှားပြီး ဂျာနယ်တိုက် နှစ်ခုကို ခွဲပို့မိတာ ထင်တယ်။